Oflọ nke kaadị 5: "Oge M" | Akụkọ akụrụngwa
Oflọ nke kaadị 5: "Oge m"
Jose Alfocea | | Ihe nkiri na usoro, General
Mata !! Isiokwu na-esonụ nwere ike ịnwe NDO NA-EME OGA. Ọ bụrụ n’achọghị ịma ihe ọbụla gbasara oge ise nke House of Cardsbiko agula na Ọ bụrụ n’ịga n’ihu, ọ ga-adị n’okpuru naanị ọrụ gị.
O were m ụbọchị atọ iji rie nke ọhụrụ ahụ, mana ọ bụghị nke ikpeazụ, oge nke otu n'ime usoro kachasị mma emere n'oge ndị a, House of Cards. Nkeji nke mbụ mere ka mmanya dị elu, dị elu nke ukwuu, ndị ọrụ ọ ga-enwe ike imeri ya?
1 Oge nke ise na-ezute atụmanya
2 Site na ịgba izu megide aghụghọ: kwupụta na "Underwood Nation"
Oge nke ise na-ezute atụmanya
Agaghị m akụ aka n'ohia. Oge nke anọ nke House of Cards Ọ dị ezigbo egwu, na-enwe njedebe dị egwu ma na-atụ ụjọ na ọ siri ike iche n'echiche ebe agbapụ ga-aga. Ma mgbe ụfọdụ mgbe ogwe ahụ rịrị elu, atụmanya ndị a bụ na ị nweghị ike inyere ma ọ bụrụ na ị na-eche eziokwu. "Iri uto" na retinas. Ise oge nke House of Cards ọ bụ, n’uche nke m, nkọwa zuru oke, yana ụda nke nwere ike ime ka onye na-ele ya belata oge ụfọdụ. N'ezie, m ga-anwa anwa ikwu na ha gbalịrị ịgbatị ya n'ụzọ ọ bụla, ma ọ bụrụ na nke a ga-ekwe omume na ngwaahịa akụkọ ifo. N'iburu nke a, oge ụfọdụ na-egosi anyị dị ka nke na-esiteghị na mberede, ma ọ bụ ikekwe anyị agaghị enwe mmasị ịga usoro nke na-eduga na nhoputa nke Claire dị ka onye isi ala oge nke United States? Otu nime wayo, ma ọzọ nke bu ájá. Ma n'agbanyeghị nke ahụ, ihe kachasị ọtụtụ nkọwa, foto nke na-enye gị ohere ịmara mmetụta nke oge ahụ, yana ederede akọwapụtara nke ọma, bulie elu. House of Cards, maka afọ nke ise na-esote, na Olympus nke History of Television Series.
Site na ịgba izu megide aghụghọ: kwupụta na "Underwood Nation"
Biko, ọ bụrụ n ’ileghara ọkwa izizi anya na mbido akwụkwọ a, mee ya ugbu a: OBI MMADO NA-EME !!
N'ime oge anọ izizi anyị na - ahụ ngụda na ụbọchị ntuli aka nke Onye isi ala. Francis na Claire Underwood gara n'ihu atụmatụ ha nke bipụta ụjọ n'etiti ndị mmadụ dị ka akụ kachasị mma iji hụ na mmeri ntuli aka. Ma na agbanyeghị na atụmatụ anaghị eso mgbe niile ụzọ ndị ọkachamara anyị bụ Machiavellian kwuru, Francis anaghị ahapụ anyị ohere ịnwe obere obi abụọ gbasara ebumnuche ya: "Agaghị m ekwe".
Kemgbe mmalite nke oge anyị na-ahụ nke ahụ akụkọ a dị adị karịa mgbe ọ bụla, na ọ bụ ezie na nzukọ ndị na-eyi ọha egwu bụ echiche ICO, e si na eziokwu (Syria, Russia), Victor bụ Putin karịa mgbe ọ bụla, Conway na-egosi anyị ezigbo ihu ya, na mgbe ị hụrụ Frank, echefuru Kevin Spacey, don 'Ahụghị onye omee ahụ, ị ​​hụrụ onye Francis nwere ike ikwenye n'ụzọ ọ bụla, agwa ị hụrụ n'anya na ụbọchị nha anya, onye ị gaghị achọ dịka onye isi ala mana onye, ​​agbanyeghị, ịchọrọ ka ọ ga n'ihu n'atụmatụ ya.
Bịa ụbọchị ntuli aka, anyị ga-agba àmà nke N'okpuru igwe nke nduhie: na-emegharị nsonaazụ ntuli aka dum, ọ bụkwa na Francis doro anya na ọ dịkarịrị mfe ịmegharị ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị nwere mmasị bụ ndị enwere ike iduhie, mebie ma ọ bụ jisie ozi ike, karịa ọtụtụ ụmụ amaala.
"Enwere m ike ibelata ntuli aka mba na otu steeti," ọ ga-abịa kwado na nke asatọ. Mana nke a bụ ebumnobi ya n'ezie n'agbanyeghị onye doro anya na ntuli aka furu efu tupu oge eruo? N'oge gara aga, na nke ise na nke isii, anyị hụrụ nzụlite izu iteghete n'oge, oge nke United States nwere onye isi oche mbụ, na onye isi oge oge. Ee, ọ bụ Claire Underwood na mbido nke mbụ ya maka ike ga-abụ oke. Site n'oge ahụ ihe ọ bụla agaghị adị otu ọzọ, ọbụnadị n'ime House of Cards, ma ọ bụ na United States na-eche n'echiche? na ọ na-anọchi anya ya, ma ọ bụ n'obi nke alụmdi na nwunye nke agụụ maka ike na-akpali.
Claire Underwood ga-egosipụta, dị ka a ga - asị na m emeghị ya na mbụ, Kedu ihe eji eme pasta, na ọ naghị ama jijiji mgbe ọ na-eche ihu ihe odide dị ka Victor (n'echiche m, Putin's alter ego) na na, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ọ dịkwa oke ike nke ịnwụ na ile anya na anya ya.
Ee, oge nke ise nke House of Cards mechie site na ntụgharị nke egosiputara na mbido mana na rue mgbe okwesiri, anyị enweghị ike ikwenye: United States bụ mba dị njikere ịkwado nwanyị mbụ na-anọ n'ọfịs oval, nwanyị nke bụkwa onye na-egbu ọchụ na onye na-alaghị azụ. raara onye gi na ya na - ebi ndu: "My turn." N'ọdịnihu, House of Cards ga-abụ nwanyị karịa mgbe ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Ihe nkiri na usoro » Oflọ nke kaadị 5: "Oge m"
Anyị na-atụnyere iMac Pro na PC ejiri nke otu nkọwa ahụ